Mareykanka Oo Ku Hanjabay Dib U Eegista Xiriirka , Cunaqabateyn iyo Hakinta Safarada – Goobjoog News
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay si cad uga soo horjeesatay mudda kordhin loo sameyay Maxamed Cabdullahi Farmaajo .
Qoraal ka soo baxay Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu ka fikirayo Cunaqabateyn uu Saaro Soomaaliya , In uu Hakiyo xiriirka uu la leeyahay iyo sidoo kale in uu Joojiyo Safarada uu ku yimaado Soomaaliya .
Hoos Ka Akhriso Qoraalka Mareykanka
Waxaan si isdaba joog ah carabka ugu adkeynay inay muhiim u tahay nabada, xasiloonida, barwaaqada, iyo dowladnimada Soomaaliya in Dowlada Federaalka iyo Dowladaha xubnaha ka ah Federaalka ay gaaraan heshiis la isku raacsan yahay oo ku saabsan dariiqa loo marayo geeddi socodka doorashooyinka.
Waxaan sidoo kale si cad u sheegnay in Mareykanku uusan taageerin muddo kordhinta iyadoo aan taageero ballaaran laga helin daneeyayaasha arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya, sidoo kale Mareykanku ma taageerayo geeddi-socodka doorashooyinka isbarbar socda ama qeyb ahaan.
Tallaabooyinka noocan oo kale ah waxay noqon doonaan kuwo si qoto dheer u kala qaybiya, wiiqaya hannaanka federaalka iyo dib u habeynta siyaasadeed ee xudunta u ahaa horumarka dalka iyo iskaashiga lala yeelanayo bulshada caalamka, waxayna ka weecinayaan ka hortagga Al-shabaab. Waxay sidoo kale dib noqonayaan u dhac dheeri ah oo ku yimaada doorashooyinka Shacabka sugayaan .
Dhaqangelinta sharcigan ayaa caqabad weyn ku noqon doonta wadahadalka isla markaana sii wiiqaya nabadda iyo amniga Soomaaliya. Waxay ku qasbi doontaa Mareykanka inuu dib u qiimeeyo xiriirkeenna laba geesoodka ah ee aan la leenahay Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, oo ay ku jirto ka qeyb qaadashada diblomaasiyadeed iyo kaalmada, iyo inuu tixgeliyo dhammaan aaladaha la heli karo, oo ay ku jiraan cunaqabateynta iyo xaddidaadda fiisaha, si looga jawaabo dadaallada lagu wiiqayo nabadda iyo xasilloonida.